मझेरी भलाकुसारी, अंक १४ (गीता थापा दोषी) | मझेरी डट कम
ks — Sat, 01/26/2013 - 12:16
गीताजी ! तपाईँलाई मझेरी भलाकुसारीमा स्वागत छ । शुरुमा, परिचय दिनुस् न।
धन्यवाद ! मेरो नाम गीता थापा । उपनाम (दोषी) । घर बेलबारी-२ मोरङ । हाल-इजरायल ।
लेख्न कसरी थाल्नुभयो ?
सानैबाट मेरो रुचि साहित्यप्रति थियो । गाउँघरमा देखिएका घटना, बिकृतिहरूलाई म गीत कवितामा कोरकार गर्थें । म लेखेर आफ्नो मनले खाएका साथीलाई सुनाउँथें । तर म थोरै अन्तर्मुखी स्वभावकी हुनाले मेरा रचना धेरै वर्षसम्म आम पाठक माझ पुग्न सकेको थिएन । जब विदेशिनुपर्ने वाध्यता आयो तव फुर्सतको समय र एक्लोपनको साथी मैले साहित्यलाई बनाएँ । लेख्दै जाँदा पाठकहरूको स्नेह र प्रेरणादायी प्रतिक्रियाले मभित्र ऊर्जा थपियो । र अर्को कुरा यसमा सामाजिक सञ्जाल फेसबूकले पनि अहम भूमिका खेलेको छ ।
मझेरीमा तपाईँका कविता, कथा, गीत, गजलहरू पढ्न पाइन्छ । आफूलाई चाहिँ कस्तो लेखक भनेर परिभाषित गर्न चाहनुहुन्छ ?
म सबै जसो विधाकी अनुरागी, प्यासी हुँ । तर मुलरुपमा म आफूलाई साहित्य क्षेत्रकि अनुरागी र एक शिकारु छात्रा ठान्छु ।
मनपर्ने लेखकहरूको नाम लिनुपर्दा कसलाई सम्झनुहुन्छ ?
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला बिष्णु कुमारी वाईबा । पछिल्लो समयका युवाहरूमा चाहिँ ददी सापकोटा, झमक घिमिरे लगायत केही छन् ।
अहिलेसम्म केही कृति निकाल्नु भएको छ ? या त्यस्तो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
अहिलेसम्म मेरा कृति धेरै नै आए । ती फुटकर रुपमा विभिन्न अनलाइन मेडियामा देखिए । तर पुस्तकका रुपमा भने आएका छैनन् । हाल विदेशमा छु । त्यसैले नेपालको परिस्थिति, बजार, र प्रकाशकसम्म मेरो पहुँच पुगेको छैन । बाहिर भएकाले आफैंले त्यो मिलाउन र खोज्न पनि भ्याएकी छैन । तर मैले कथा र लघु कथाका एक एक पुस्तक निकाल्न पुग्ने रचना बनाएर बसेकी छु । प्रकाशक पाए म तिनलाई पुस्तकको रुप दिउँ भन्ने सोचमा छु । हतारिएकी भने छैन । त्यसै गरि मेरा गीत, गजल र मुक्तकपनि निकै कोरिएका छन् । तिनलाईपनि पुस्तकको रुप दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने त लाग्छ नै ।
बिदेशमा रहनुले तपाईँको लेखन र जीवनलाई कसरी फरक पारेको छ ?
बिदेशमा रहँदा एउटा कुरा के हो भने यहाँ ईन्टरनेट र बत्तीको पहुँच सहज छ । जसले गर्दा लेख्न पढ्न सहज छ । तर अर्को कठिनाई के भने नेपालको साहित्यिक परिवेश बुझ्न कठिन हुन्छ । पुस्तकहरूको प्राप्ति सहज छैन । हाम्रा स्रष्टाका गहकिला पुस्तकभन्दा नेटमा मात्रै भर पर्नु परेको छ । त्यसले गर्दा ज्ञानको दायरा सोचे जसरी फराकिलो पार्न नसकिने रहेछ । त्यसै गरी गाउँ ठाउँ घुमेर, देखेर, पात्रका प्रवृत्ति र भोगाई देखेरै लेख्न नपाइने हुनाले सोचे जस्तो सिर्जना गर्न सहज नहुने रहेछ भन्ने लाग्छ । जीवन त स्वदेशमै रमाउँछ । तर केही समय विदेशको अनुभव लिन पाउनुपनि राम्रो हो । किनकि आफ्नो देशको परिवेशसित तुलना गर्न, जान्न बुझ्न पाइन्छ ।
तपाईका रचनाहरूमा देशप्रेमदेखि लिएर माया-प्रीति र बिदेशिनुको पीडासम्म पढ्न पाइन्छ । कस्तो समयमा लेख्नुहुन्छ र कस्ता विषयमा लेख्न रुचाउनुहुन्छ ?
मैले लेख्ने भनेको कि साँझ कि विहानको समय हुन्छ । राति निद्रा माया मारेर मैले कहिल्यै पनि लेखेकी छैन । किनकि मलाई निद्रा असाध्यै प्यारो लाग्छ । रचनाको बिषयमा भन्नुपर्दा सबैका आ-आफ्ना चाख, चासो र सिल्पका विषय होलान् । म सस्ता, यौनका फितला कुरा र मजाककालागि भन्दा केही सन्देश दिने, अन्याय अत्याचार बिरुद्द बोल्न साहस दिने, केही शिक्षा दिने उपयोगी रचना गर्न रुचाउँछु । हाम्रो देश र समाजको लागि अहिले यस्तै उपयोगि रचनाहरूको खाँचो छ जस्तो लाग्छ ।
लेखेर भविष्यमा यस्तो बनुँ र यस्तो गरूँ भने केही त्यस्तो सपना देख्नुभएको छ ?
असल लेखिका बनौं, नाम कमाउँ, सेवा गरौं भन्ने सानो इच्क्षा त सायद सबैको होला । म मात्रै अलग नहुँला त्यो सोचाईबाट । तर मैले त्यस्तो ठूलो महत्वाकांक्षा भने पालेकी छैन । साहियलाई बुझौं, जानौं, अलि गहिराईमा पुगौं र केही सिर्जना गरौं भन्नेसम्म छ ।
सन्तुष्टनै छु भन्नु पर्छ मैले । मैले कस्सिएर लेख्न थालेकै धेरै भएको छैन । त्यसैले आफ्नो मेहनत, समय र साहित्यलाई सिर्जना गर्न जे जति वस्तु, सामाग्रि चाहिन्छन् त्यसको पहुँच अनुसार सकारात्मकनै मान्छु म । तर स्वदेशमै बसेर, घटना र प्रवृत्ति अनि पात्रहरू नियाल्दै लेख्न पाएको भए सायद अलि परिस्कृत हुँदो हो कि भन्ने लाग्छ ।
यो उपनाम --- दोषी --- किन ?
विदेशिने नारीलाई हाम्रो समाजको हेर्ने दृष्‍टिकोण र मुल्याङ्कन गर्ने गलत धारणामा अझैं सम्म सुधार भैनसकेको अवस्था छ । त्यसकारणले पनि मलाई लाग्यो, एउटी नारी जन्मशिद्ध दोषी हुँदिरहिछे । त्यसैको आधारमा मैले मेरो नामको पछाडि दोषी झुन्ड्याएकी हुँ ।
म स्वदेशी विदेशी लेखक, पत्रकारका सिर्जना पढेर, लेखेर र ज्ञानवर्दक भिडियो हेरेर, सुनेर बिताउँछु ।
इजरायलमा बस्नुहुँदो रहेछ । त्यहाँ त निकै ठुलो साहित्यिक माहोल छ क्यार ! त्यहाँको साहित्यिक भीडमा कत्तिको सरिक हुनुहुन्छ ?
म पनि सुन्छु जमघटहरू भएको । तर म उति सरिक हुने गर्दिन । एउटा कुरो साहित्यिक फाँटमा सिकाउन सक्ने, आफूले सिक्न पाउने स्तरका स्रष्टाहरू उति भए झैं लाग्दैन । ईजरायलमा । वा मैले नदेखेकि पो हुँ कि ! अर्को कुरा त्यस्ता जमघट इजरायलका मुख्य ठूला शहरमा हुन्छन् । म अलि गाउँमा बस्छु र पनि मलाई सहज हुन्न । त्यस्तै, म अहिले सिक्नतिरै धेरै समय दिन्छु र आफ्नै दुनियाँमा रमाउने खाले छु । त्यसैले मेरो सहभागिता खासै हुन्न भने पनि हुन्छ ।
ट्विटर त मैले प्रयोग गरेकी नै छैन । फेसबुकलाई भने मैले भरपुर उपयोग गरेकी छु । कथा, कविता, गजल र लघुकथा सम्प्रेषण गर्ने मुख्य थलो नै फेसबुक भएको छ मेरो अहिले ।
साहित्यका रुची हुने, सिकारुहरूका लागि सहज तरिकाले सामाग्री उपलब्ध होउन् । बाटो देखाउने सर्जकहरूले नेटबाटपनि साहित्यका जटिलता, भाव, बिधा, गल्ति कमजोरी औंल्याउने माध्यम होस् । नाम चलेका लेखक र साहित्यकारका सिर्जना मात्रै होइन कि नाम नचलेकाकोपनि सिर्जनाहरू हेरेर तिनले स्थान पाउन् । चाहे मेडिया होस् कि पुस्तकको रुपमा । जाने बुझेका सर्जकहरूले सिकारुका सिर्जना पनि हेरिदिउन्, सुझाव दिने गरुन् । युवाहरू जहाँ अल्मलिन्छन् त्यहाँ स्वच्छ मनले सहजीकरण गरिदिने अग्रजहरू उपलब्ध भैदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
तपाईँ गत साँढे तीन बर्ष यता लगातार मझेरीमा लेख्दै हुनहुन्छ । मझेरीलाई कस्तो मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? यति लामो समयसम्म निरन्तरता दिन सक्नुको कारण के होला ?
निरन्तरता दिनुको मुख्य कारण भनेकै साहित्यप्रतिको रुचि र प्रेम हो । मझेरीले मजस्ता सिकारुलाई ठाउँ दिएको छ । रचनाको स्तर खस्किँदा सुझाव सल्लाह पनि दिएको छ । मझेरीले लगाएको गुण म जीवनमा कहिल्यै बिर्सिन सक्तिन । निस्वार्थ भावना, सरल सहज पहुँच, चिनेको आधारमा भन्दा पनि राम्रा रचनाको आधारमा नयाँ पुराना सिकारु स्रष्टालाई स्थान दिनुनै मझेरीको विशेषता हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैकारणले पनि म मझेरीमा मेरा रचना सम्प्रेषण गर्छु । र धेरै पटक मैले मझेरीमा रचना सम्प्रेषण गरिसकेपछि सन्तुष्ट अनुभूति गरेकी छु । खासमा भन्नुपर्दा म एउटी मझेरीकी नियमित पाठक पनि हुँ ।
यी तीन वर्षमा तपाईँको लेखन निकै खारिएको महसुस गरेको छु । तपाईँलाई कस्तो लाग्छ ? यो कसरी सम्भव भयो ?
तपाईले जे मूल्यांकन गर्नु भो त्यस्तो त मलाई लाग्दैन । तर सुधारिएको भने पक्कै हो कि ! खारिन त निकै वर्ष लाग्ला । मैले गएका दुई तिन वर्षदेखि अलि बढिनै साधना गरेकी छु । म समय पाउनासाथ सकभर लेख्ने पढ्ने नै गर्छु । यो साहियभित्रको सागरभित्र पसेर हेर्ने कोसिस गरिरहेकी छु । सोचे जस्तो भएको त छैन । तर केही सुधारिएको हो कि त्यसैको प्रतिफलले ।
मझेरीमा मात्रै तपाईँका १२० जति रचना छन् । यिनलाई भविष्यमा किताबको रुपमा निकाल्ने बारे सोच्नुभएको छ ?
मैले अघि पनि भनिसकें । भविष्यको योजना भनौं कि रहर भनौं, छ । तर प्रकाशक पाए म अहिलेनैपनि तयार छु । पुस्तकलाई पुग्ने रचना झण्डै झण्डै तयार पारेरै बसेकी छु । प्रकाशक खोज्दै हिँड्कि चाहिँ छैन । तर पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ सोचिरहेकी छु ।
पहिला पहिला सबैजसो अन्लाइन पत्रिकामा पठाउँथें । तर हिजो आज कहिलेकाहिँ नेपालप्लस डट कमलाई पठाउँछु । साथीहरूले माग्नु भयो भने नाईनास्ति गरिहाल्दिन । कतिले फेसबुकबाटपनि साभार गर्नुहुन्छ र लिन्क पठाइदिनुहुन्छ । खुसी लाग्छ । अचेल त मझेरी र सामाजिक सञ्जाल फेसबुकनै हुन् मैले बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने ।
नामै लिनु पर्दा कुनै एकको नाम लिन सक्तिन म । स्रष्टाको साधना र मेहनतमा भर पर्ने कुरा भएको हुँदा आ-आफ्नो मेहनत, साधना र लगाव, अनुसार सबैका रचना राम्रा छन् । र आशा लाग्दा अनुहार देखा परिरहेका छन् ।
अरुको रचना पनि पढ्ने बानी बसालौ । चिनेजानेको भरमा जस्ता रचनालाई पनि उत्तम ठान्ने, नचिनेको स्रस्टाको छ भने वास्तै नगर्ने नगरौं । साहित्य भनेको जीवन र जगत बुझाउने सुन्दर माध्यम हो । तपाईहरूले राम्रा रचनालाई पक्षपात नगरिकन सुझाव सल्लाह दिनुभएको खन्डमा आगामी दिनमा हाम्रो देशमा पनि राम्रा स्तरिय रचना लेख्ने स्रष्टाको आभाव खट्किने छैन । अहिलेसम्म हामी विदेशी लेखकको प्रशंसक भएर बाँचेका छौ । अब हामीले आफ्नै कला र साहित्यलाई माया गर्नुपर्छ र विश्व बजारमा पुर्याउन सहयोग गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु ।
भन्नुपर्ने कुरा जति सबै माथि नै भनिसकें। अन्त्यमा धेरैको मन जित्न सफल, साहित्यिक क्षेत्रमा राम्रो योगदान गरिरहेको र यस फाँटको ठूलो भण्डार मझेरी डटकमको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु ।
गीता थापाका दोषीका रचनाहरू
गीता थापाका दोषीका रचनाहरू (सूची)
‹ मझेरी भलाकुसारी, अंक १५ (राजेश रुम्बा लामा अतृप्त) मझेरी भलाकुसारी, अंक १३ (बुद्धि मोक्तान) ›
Majheri yatrama doshiko den
nandalal.acharya — Sat, 01/26/2013 - 18:11
bhalakusari manoyogle padiyo.
Ma bideshma bhaeko bhae sahityama eka kshar pani lekhne thiena....je hos....parai desma raher yatro den dinu doshiko tthulo yogdan ho bhanne lagyo......
Shubhakamana & welcome for your journey.
Udeshyale man chhoyo.
Bichardhara urdhawagami chhan.
Mero yatra majherisang3yrs bhae6.
Thank you very much majheri & geeta g !
mero chhuttine bela bhayo.
My daughter garima is telling me ta say herastory.
I have told many stories written by doshi to her.
I am looking for u (Geeta
अतिथि (not verified) — Mon, 01/28/2013 - 13:19
I am looking for u (Geeta Thapa) on Facebook from beginning but i can't,If you don't mind could you just send link of Ur Facebook account.
गीता थापा दोषी
ks — Sat, 02/02/2013 - 08:22
गीताजीलाई अन्तर्बार्ताको लागि धन्यवाद छ । यहाँको साहित्यिक यात्राको शुभकामना छ । मझेरीको पाठकहरूको लागि पनि लाभदायी भयो होला भन्ने आश छ ।
गीता थापा दोषी (not verified) — Sat, 02/02/2013 - 15:46
सर्वप्रथम त यस मझेरिका सञ्चलाक कुमारजी!प्रति म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु! उहाँले यो अवसर जुराइदिनुभएर'नै मैले आफ्ना मनमा लागेका तिता मीठा कुरा शब्द मार्फत पोख्न पाएँ। आफ्ना पाठकदिर्घा माझ पुराउन पाएँ। तपाईलाई हृदय देखिनै धेरै धेरै धन्यवाद!कुमारजी!
शायद यो मेरो कमजोरी पक्ष हुनसक्छ। मेरो अन्तर्वार्ता आ'को छ पढिदिनुस् अथवा हेरेर केही प्रतिक्रिया दिनुस् भन्ने मेरो स्वभाव छैन। त्यसैले पनि जति मित्रहरूले पढिदिनुभयो,फकेबूकमा लिन्क राखेको आधारमा र मझेरीमा त्यसको लागि म उहाँहरू सम्पूर्णलाई हृदय देखिनै हार्दिक आभर व्यक्त गर्दछु।
(गीता थापा दोषी)
अतिथि (not verified) — Sun, 02/03/2013 - 16:51
श्रष्टाको सम्मान पढेर अत्यन्तै खुसि भएको छु ओहोरै राम्रो संग स्रष्टा चिन्ने अवसर पाएँ गीता दोषी जी संग परिचय भएको पनि ३ साल भयो मझेरी मार्फत नै मझेरी नै यस्तो साहित्यको भण्डारको जहाँ नेपाली भाषा साहित्यको जगतमा सबैको प्यारो साहित्यको छहारी भएको छ, प्रथमत: कुमार सरलाई हजार साहित्यिक अभिबादन गर्दछु तथा श्रष्टा गीता थापा दोषी जी लाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु ..
मनोज काफ्ले 'मनसून'